Eyona ndawo i-Yongsheng ibhedi yasekhaya eyenzelwe ibhedi kunye nomvelisi | Tianda
Ngaba ujonge ukubuyisa umuzwa we-charm esele idlulile? Yiphuphe, uphile kunye nombhede wesinyithi waseNashburg. Isakhelo esimnyama se-matte esine "fittings" ezibunjiweyo ezilinganisa kakuhle iibhedi zentsimbi eyenziweyo ukusuka kudala ukuze ujongeke ngokugqibeleleyo kwindlu yakho yasefama yanamhlanje okanye i-cottage-quaint yokuphuma.
Iinkcukacha kunye nokujonga ngokubanzi
Uphefumlelwe ngesitayile seshishini, ibhedi yaseYongsheng yentsimbi iya kuzisa umnwe kwigumbi lakho lokulala kwangoko. Ukulula okuvela kwisakhelo sayo sebhedi kunika imvakalelo eyahlukileyo efanelekileyo yokuhlaziya naliphi na igumbi nokuba lelomntwana, elivisayo okanye likhulile. Uyilo ngononophelo ngesakhelo sesinyithi, iileyile ezisecaleni kunye nemilenze exhasayo, siyakuqinisekisa ngenkxaso ehlala ihleli kunye nokuqina. Isibonelelo senkxaso eyongeziweyo kuwo omabini umandlalo kunye noomatrasi enkosi kwii-slats zayo ezikhuselekileyo zesinyithi. Khetha kwiindawo eziphakamileyo ezimbini: nokuba kukucoca nge-7 okanye i-intshi ye-11, ukonwabela indawo eyongezelelweyo phantsi kwebhedi yakho. Iluncedo lokugcina nantoni na ukusuka kwimpahla ukuya kumathoyizi okanye nakwiibhedi. Ifumaneka ngombala omhlophe nomnyama kuwo onke amawele amawele, agcweleyo, oKumkanikazi kunye noKumkani Iinqanawa kwibhokisi enye yokuphatha ngokulula kwaye zihlangana ngaphandle kwamandla. Ukulala ngesitayile kunye neBelmont Metal Bed.
Ngaba ujonge ukubuyisa umuzwa we-charm esele idlulile? Yiphuphe, uphile kunye nombhede wesinyithi waseNashburg. Isakhelo esimnyama esimnyama esine "fittings" ezibunjiweyo ezilinganisa kakuhle iibhedi zentsimbi eyenziweyo ukusuka kudala ukuze ujongeke ngokugqibeleleyo kwindlu yakho yasefama yanamhlanje okanye i-cottage-quaint yokuphuma.
• Yenziwe ngentsimbi
• Kuquka i-headboard, i-footboard kunye neileyili
• Ukugqitywa kwePowdercoat
• Izandi zesinyithi ezibunjiweyo
Isiseko / ibhokisi yasentwasahlobo iyafuneka, ithengiswe yodwa
• Imatrasi ikhona, ithengiswa yodwa
• Indibano iyafuneka
Uqikelelo lwexesha leNdibano: Imizuzu engama-30
Iiplani ezingama-65. (Iikhilo ezingama-29.48.)
Ububanzi: 65.25 "
Ubunzulu: 85.25 "
Ukuphakama: 50.00 "
Ububanzi bedilesi yokumkanikazi obudibeneyo: 65.25 "
• Idityanisiwe ibhedi yokumkanikazi Ubunzulu: 85.25 "
• Idibene ibhedi yokumkanikazi Ukuphakama: 50.00 "
Ububanzi besitimela: 62.00 "
• Uloliwe ukuya kumgangatho: 6.63 "
Ububanzi bebhodi ebhodi: 65.25 "
Ubunzulu beNtloko: 1.63 "
Ukuphakama kwebhodi yentloko: 50.00 "
Ububanzi bebhodi yeenyawo: 65.25 "
Ubunzulu bebhodi yeenyawo: 1.63 "
Ukuphakama kwebhodi yeenyawo: 28.75 "
Iphaneli ukuya kumgangatho: 23.00 "
Iinkcukacha zeMveliso ezingakumbi
Egqithileyo Yongsheng ekhaya kombhede ibhedi, emnyama, ibhedi kabini
Okulandelayo: Yongsheng ekhaya yonke ibhedi yesinyithi, emnyama
Yongsheng ekhaya yonke ibhedi yesinyithi, emnyama
Yongsheng ikhaya elimnyama elikhulu elikhulu ebhedini ekhuselweyo
Yongsheng ekhaya kombhede ibhedi, emnyama, ibhedi kabini